Highlight Of Europe | GO & GO Travels
15 Days / 14 Nights Highlight Of Europe
( ပြင်သစ် – ဘယ်ဂျီယန် - ဟော်လန် - ဂျာမဏီ - ဆွစ်ဇာလန် – အီတလီ )
Day 1 : Arrival Day In Paris ( ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိသည့်နေ့)
ရန်ကုန်မြို့မှ ထိုင်းအဲဝေးလေကြောင်း ( သို့) ကာတာအဲဝေးလေကြောင်းဖြင့် ( ဝ၉း၅ဝ )တွင်ထွက်ခွါပါမည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ သုဝဏ္ဏဘုံမိလေဆိပ်သို့ (၁၁း၄၅ ) တွင်ရောက်ပါမည်။ ထိုလေဆိပ်မှ ( ၁၂း၎ဝ )တွင်ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပါရီမြို့လေဆိပ်သို့ဒေသ စံတော်ချိန်ညနေ (၁၉း၎ဝ) တွင်ရောက်ရှိပါမည်။ လေဆိပ်မှထွက်ခွါခွင့်လုပ်ပြီးလျှင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး၊ တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ပို့ဆောင်ပေး၍ ဟိုတယ်ဝင်ခွင် ပြုလုပ်ပေးနေစဉ်ဟိုတယ်ဧည့်ခန်းမ၌ခေတ္တအနားယူနိုင်ပါသည်။ ၄င်းနောက် အခန်းများ အတွင်းသို့မိမိတို့ ၏ ပစ္စည်းများ ကိုနေရာချပြီး၊ အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။ Hotel : Ibis Styles Paris Bercy ( or ) Similar
Day2: Paris Full Day Tour (B/ L / D ) ( ပါရီမြို့လည်ပတ်သည့်နေ့)Cold Buffet Breakfast
နံနက်စာကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ ( ဝ၉းဝဝ ) အချိန်ခန့်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့သို့စတင်လည်ပတ်ပါမည်။ ပါရီမြို့ ၏ ထင်ရှားသောရှောင်ဇေလီဇေလမ်းမကြီးတလျှောက်ကားမောင်းပြီး၊ Place de la Concorde and the Arc de Triomphe များကိုကားပေါ်မှကြည့်ရှုနေစဉ်ဧည့်လမ်းညွှန်မှရှင်းလင်းပြောပြပါမည်၊ ဆက်လက်၍၊ နာမည်ထင်ရှားကျော်ကြားသော Louvre ပြတိုက၊ Montparnasse နှင့်နိုတြာဘုရားကျောင်းကို ဝင်ရောက်လေ့လာလည်ပတ်ပါမည်။ လေ့လာကြည့်ရှုသူများ လွန်စွာများပြားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နာမည်ကျော်ဗီးနပ်စ်ရုပ်ထုအပါအဝင် အနုပညာလက်ရာမြောက်လွန်လှသောကျောက်ဆစ်ရုပ်ထုများ တည်ရှိရာ ခန်းမ၊ မိုနာလီဇာပန်းချီကားနှင့် တကွပြင်သစ်သမိုင်းကြောင်းကိုဖေါ်ပြရးဆွဲထားသော အံ့သြဖွယ်ရာပန်းချီခန်းမနှင့် ဘုရားကျောင်းတို့တည် ရှိသောပြတိုက်ကိုတွေ့မြင်ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါသည်။ ၄င်းနောက် နေ့လည်စာကိုတရုတ်စားသောက်ဆိုင်တွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ နေ့လည်စာစားပြီးနောက်အီဖယ်မျှော်စင်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ အီဖယ်မျှော်စင် ဒုတိယထပ်မှပါရီမြို့၏ လှပသော ရှုခင်းများကိုကြည့်ရှုခံစားပါမည်။ တဆက်တည်း၊Mouches မြစ်တလျှောက် Seine Cruise စီးရင်းဖြင့် They Arcade Triomphe, The Champs Ely sees များကိုလည်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးနောက်ညနေစာကို Le Panorama စားသောက်ဆိုင်တွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ ၄င်းနောက် ဟိုတယ့်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ Hotel : Ibis Styles Paris Bercy ( or ) Similar
Day3: Paris – Versailles - Paris ( B / L / D ) (ပါရီမြို့– ဗာဆိုင်းနန်းတော် - ပါရီလည်ပတ်သည့်နေ့) Cold Buffet Breakfast
နံနက်စာကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ ( ဝ၉းဝဝ ) အချိန်ခန့်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ ဗာဆလီသို့ထွက်ခွါပါမည်။ ကမ္ဘာတွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသောစစ်ဘုရင်စံမြန်းခဲ့ရာကြီးကျယ်ခန်းနား လှပလွန်းသာမက၊ ဖက်ရှင်ခေတ်ဦးဟု ဆိုရမလောက်ဖြစ်သော သမိုင်းဝင် နန်းတော်ကြီးကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ပြတိုက်အဖြစ်ပြသထား သော၊ ဗာဆိုင်းနန်းတော်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခံစားနိုင်ပါသည်။ ၄င်းနောက် နေ့လည်စာကိုဗာဆိုင်ရှိ New Hongkong စားသောက်ဆိုင်တွင် ဧည့်ခံကျွေးမွေးပြီးနောက်၊ ဗာစလီမှပြန်လည် ထွက်ခွါပြီးနောက်၊ Montmartre Funicular သို့သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ တဆက်တည်ှး Sacre Coeur Basilica ကိုပါလည်ပတ်လေ့လာကြပြီး၊ Naepmudk Chez Edouard စားသောက်ဆိုင်တွင်ပြင်သစ်အစားအစာ Snails Starter ကို ဝိုင်းတစ်ခွက်သောက်ရင်း သုံးဆောင်ရန်စီစဉ်ထားပါသည်။ ညနေစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ( ညပိုင်းတွင်ပါရီမြို့ရှိနာမည်ကျော် Lido Show ကို ကြည့်ချင်ပါကမိမိအစီအစဉ်ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ )၊ ပါရီတွင်ညအိပ်ပါမည်။ Hotel : Ibis Styles Paris Bercy ( or ) Similar
Day4: Paris – Brussels ( B / L / D ) ( ပါရီမြို့- ဘရပ်ဆဲ ) Cold Buffet Breakfast
နံနက်စာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ၊ပါရီမြို့မှ ၃ဝ၉ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်ရှိသော၊ ဘယ်ဂျီယမ်နိုင်င၊ံဘရပ်ဆဲမြို့သို့ထွက်ခွါပါမည်။ နေ့လည်စာကို Chao Chow City တရုတ်စားသောက်ဆိုင်တွင်သုံးဆောင်ပြီး နောက်၊ ဘရပ်ဆဲမြိုကို စတင်လည်ပတ်ကြရာတွင်၊ ဂရင်းပဲလေ့စ်၊ မြို့တော်ခန်းမနှင့်ကလေးငယ်ဆီးသွားနေသောကြေးရုပ်တို့ ရှိရာကိုလည်ပတ်ပါမည်ပြီး၊ ဘယ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ၊ ဘရပ်ဆဲမြို့သည်ချောကလက်၊ ဘီယာတို့နာမည်ကြီးသောမြို့ဖြစ်သောကြောင့် ၊ မိမိတို့ ဧည့်လမ်းညွှန်မှချောကလက်ဆိုင်၊ ဘီယာဆိုင်တို့ကို လိုက်လံပြသပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ မိမိစိတ်ကြိုက်အမျိုးမျိုးသော ချောကလက်များကိုဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ပါသည်။ပြီးနောက်အက်တမ်ပုံသဏ္ဍန်တည်ဆောက်ထားသောပြင်သစ်အခေါ် Atomium နှင့် ဥရောပ ၂၅နိုင်ငံ တွင်ရှိသော မြို့များကို ပုံစံငယ်များဖြင့် တည်ဆောက်ပြသ ထားသော Mini EUROPE ( Discover Europe’s Nicest Places )ကိုပါပျော်ပျော်ပါးပါး၊ သွားရောက်လည်ပတ်၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပြီးနောက်၊ ညနေစာကိုအရှေ့တိုင်းစားသောက်ဆိုင်တွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ဘရပ်ဆဲတွက် ညအိပ်ပါမည်။ Hotel :Mercure Hotel Brussels Airport ( or ) Similar
Day5:Brussel–Amsterdam ( B / L / D )( ဘရပ်ဆဲ - အမ်စတာဒမ် )ံHot Buffet Breakfast
နံနက်စာကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ ( ဝ၈းဝဝ ) အချိန်ခန့်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ ဘရပ်ဆဲမြို့မှ ၂၁၂ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်ရှိသော၊ ဟော်လန်နိုင်ငံ၏လှပသောမြို့တော်ဖြစ်သည့်အမ်စတာဒမ်မြို့သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွါပါမည်။ အမ်စတာဒမ်သို့ရောက်လျှင်၊ နေလည်စာကို Nam Kee စားသောက်ဆိုင်တွင်သုံးဆောင်ကြပြီး နောက်၊ ကမ္ဘာကျော်ဟန်နီကန်ဘီယာထုတ်လုပ်သောစက်ရုံကိုဝင်ရောက်လေ့လာရင်း၊ လတ်ဆပ်သောဘီယာကိုမြီစမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။ ပြီးနောက် DAM Square ၊ စိန်ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံများသို့သွားရောက်လေ့လာပြီးနောက်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိတူးမြောင်းတလျှောက်အပျော်စီးရေယာဉ်လေးဖြင့်၊ လှပသောအမ်စတာဒမ်မြို့ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုကြပါမည်။ ညနေစာကို De NissenRestaurant စားသောက်ဆိုင်တွင်ဧည့်ခံကျွှေးမွေးပါမည်။ ၄င်းနောက် တည်းသိုမည့် ဟိုတယ်သို့သွားရောက် check in လုပ်ပြီး၊ အိပ်စက်အနားယူပါမည်။ Hotel : PI by Radisson Amsterdam Airport Hotel Schiphol ( or ) Similar
Day6: Amsterdam - Cologne ( B / L / D )( အမ်စတာဒမ် -– ကိုလုံး )ံ Hot Buffet Breakfast
နံနက်စာကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ ( ဝ၈းဝဝ ) အချိန်ခန့်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ အမ်စတာဒမ်မှ ၂၂ ကီလိုမီတာတွင်ရှိသော ZaanseSchans ကိုထွက်ခွါပါမည်။ ZaanseSchans သို့ရောက်လျှင်၊ Cheese &Clogg စက်ရုံများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်လေ့လာပါမည်။ ပြီးနောက်ဟော်လန်နိုင်ငံ၏ထင်ရှားသောအမှတ်အသားဖြစ်သည့်လေရဟတ်များရှိရာသို့သွားရောက်လည်ပတ်လေ့လာပြီးနောက်၊ နေ့လည်စာကိုသုံးဆောင်ပါမည်။ ပြီးနောက်အမ်စတာဒမ်မှ ၂၆၉ ကီလိုမီတာ အကွာအဝေးတွင် ရှိသော၊ ဂျာမဏီနိုင်ငံ၊ ကိုလုံးမြို့သို့ထွက်ခွါပါမည်။ ကိုလုံးသို့ရောက်လျှင်၊ ညနေစာကို Peking Am Dom စားသောက်ဆိုင်တွင်သုံးဆောင်ပြီး၊ တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ဆက်လက်မောင်းနှင်ကာ၊ ဟိုတယ်ဃ့နခု ငညလုပ်ပြီးအနားယူအိပ်စက်ပါမည်။ Hotel : Ramada Hotel Huerth – Koln (or ) Similar
Day7: Cologne – Frankfurt - Mannheim ( B /L / D ) ( ကိုလုံး - ဖရမ်းဖတ် –- မန်းဟိန်း )
Hot Buffet Breakfastကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ ( ဝ၉းဝဝ ) အချိန်ခန့်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ ကိုလုံးမြို့ ၏ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်များရှိသည့်အကျော်အကြားဆုံးသောဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်း (Dom Cathedral ) များသို့သွားရောက်လေ့လာလည်ပတ်ကြပါမည်။ ၄င်းနောက် စည်ကားလှသောမြို့ ဟောင်းကိုလမ်းလျှောက် လည်ပတ်ဈေးဝယ်ကြပါမည်။ ပြီးနောက်ကိုလုံးမြို့မှ ၁၉၂ ကီလိုမီတာတွင်ရှိသော၊ ဂျာမဏီနိုင်ငံ၏စီးပွါးရေး မြို့တော်ဖြစ်သော၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဗုံးဒါဏ်ခံခဲ့ရသောကြောင့် ၊ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦများအဆောက်အဦများအစားအသစ်များဖြင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသောကြောင့်၊ တခြား ဥရောပရှိမြို့များနှင့်မတူ၊ ကွဲလွှဲပြီး၊ သစ်လွင်လှပနေသောဖရမ်းဖတ်မြို့သို့ထွက်ခွါပါမည်။ ဖရမ်းဖတ်မြို့သိုရောက်လျှင်၊ နေ့လည်စာကို China Garden restaurant တွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ နေ့လည်စာစားသုံးပြီးနောက်၊ Cathedral, Frauenchiemsee( no ferry ), Romer နှင့်ပြည်သူရင်ပြင်တလျှေက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ ၄င်းနောက် ဆက်လက်ပြီး၊ ဖရမ်းဖတ်မြို့မှ ၉၁ ကီလိုမီတာတွင်ရှိသော မန်ဟိန်း သို့ထွက်ခွါပါမည်။ မန်ဟိန်းသို့ရောက်လျှင်၊ ညနေစာကိုသုံးဆောင်ပြီး၊ တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ဆက်လက်မောင်းနှင်ကာ၊ ဟိုတယ် check in လုပ်ပြီးအနားယူအိပ်စက်ပါမည်။ Hotel : Leonardo City Center Hotel Mannheim ( or ) Similar
Day 8 : Mannheim - Heidelberg – Lucerne ( B /L / D ) ( မန်ဟိန်း - ဟန်းဒ်လ်ဘတ် –- လူဇာန်း )
နံနက်စာ Hot Buffet Breakfast ကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ မန်ဟိန်းမှ၂၂ ကီလိုမီတာတွင်ရှိသော၊ ဟန်းဒဲဘတ်မြို့သို့ထွက်ခွါပါမည်။ ဟန်းဒဲဘတ်မြို့သို့ရောက်လျှင်၊ ထင်ရှားသောဟန်းဘတ်မြို့ရိုး ( Heidelberg Castel ) နာမည်ကျာ် KariTheodor တံတား စသည်များသို့လည်ပတ်ပါမည်။ ပြီးနောက် ၊ နေ့လည်စာကိုအရသာတမျိုးထူးသောPork Menu ကို Local စားသောက်ဆိုင်တွင်ပျော်ပျော်ပါးပါး သုံးဆောင်ပါမည်။ ပြီးနောက် ၊ ဟန်းဒဲ ဘတ်မြို့မှ ၃၄၉ ကီလိုမီတာရှိသော၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ အလည်ပိုင်းရှိ ပန်းချီကားအလား လှပသောမြို့ဖြစ်သည့်လူဇာန်းမြို့သို့ထွက်ခွါပါမည်။ လူဇာန်းမြို့သို့ရောက်လျှင်၊ ညနေစာ Fish Menu ကို Local Restaurant တွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ် check in လုပ်ပြီးအနား ယူအိပ်စက်ပါမည်။ Hotel : SwissEver Hotel Zug ( or ) Similar
Day9: Lucerne –Mount Titlis ( B / L / D ) ( လူဇာန်း - တိုင်လစ်တောင် - လူဇာန်း )
နံနက်စာံ Hot Buffet Breakfast ကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊့ လူဇာန်းမြို့မှ ၃၆ ကီလိုမီတာတွင်ရှိသော၊ နာမည်ကျော်သြကညအွှငအူငျရေခဲတောင်ရှိရာ၊ အိန်ဂျယ်ဘတ်သို့ထွက်ခွါပါမည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ လှပပြီး၊ ရေခဲတောင်များထဲတွင်၊ ထင်ရှားသောနာမည်ကျော်တိုင်လစ်တောင်သို့ရောက်လျှင်၊ ရေခဲများဖုံးလွှမ်းနေသော ပေ ၁ဝဝဝဝ အမြင့်ရှိသောတောင်ကိုကေဘယ်ကားဖြင့်တက်ကြပါမည်။ အံ့မခန်း ဖွယ်လှပလွန်းသောရှုခင်းများကိုကေဘယ်ပေါ်မြှ ဖင်တွေ့ရမြှာ ဖစ် သလို၊ ရေခဲတောင်ပေါ်ကိုလည်းလမ်းလျှောက်ပြီးတက်သည့်အတွေ့အကြုံကိုသင်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ နေ့လည်စာကိုတိုင်လစ်တောင်ပေါ်ရှိဏညေသမေွာျေနျအကေမညေအ တွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ နေ့လည်စာစားသုံးပြီး နောက်၊ လူဇာန်းမြို့သို့ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။ လမ်းတွင်ုစေနူတံတား၊ ခြင်္သေ့အမှတ်တရကျောက်တိုင်နှင့်Out Let Mall များသို့လည်ပတ်ပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါးဈေးဝယ်ကြပါမည်။ ညနေစာကို3 course chicken menu ကို Local Restaurant တွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ် ပြန်လည်ဝင်ရောက်အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။ Hotel : SwissEver Hotel Zug ( or ) Similar
Day 10 : Lucerne – Milan ( B / L / D ) ( လူဇာန်း - မီလန်)
နံနက်စာံ Hot Buffet Breakfast ကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ပြီး၊ ဟိုတယ်ထွက်ခွါခွင့်ကိုလုပ်ပြီး နောက်၊ လူဇန်းမြို့မှ ၂၆၃ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်ရှိသော၊ အီတလီနိုင်ငံရှိ၊ ကမ္ဘာ့ဖက်ရှင်များ၏ အချက်အချာ ကြသောမြို့ဖြစ်သည့်မီလန်မြို့သို့ထွက်ခွါပါမည်။ မီလန်မြို့သို့ရောက်လျှင်တဆက်တည်း၊ နေ့လည်စာကိုသုံးဆောင်ပါမည်။ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ မီလန်မြို့ရှိထင်ရှားလှပသော ၊ အီတလီနိုင်ငံသားများ အထူး ဂုဏ်ယူ ဝင့်ကြွားသည့်နေရာတစ်ခုထဲတွင်အပါအဝင်ဖြစ်သည့် မီလန် ဘုရားကျောင်း Milan Cathedral ( DUOMO ), နှင့်ှ Scala Theatre များသို့လည်ပတ်ပါမည်။ ပြီးနောက်၊ လွတ်လပ်စွာဈေးဝယ်နိုင်ပါသည်။ ညနေစာကို XierRestaurant တွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ် check in လုပ်ပြီးအနား ယူအိပ်စက်ပါမည်။ Hotel : Holiday Inn Hotel Milano ( or ) Similar
Day 11 : Milan – Brescia –Venice – Moglianho – Veneto ( B / L / D ) ( မီလန် - ဗင်းနစ်စ် )
နံနက်စာံ Hot Buffet Breakfast ကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ မီလန်မှ ၁၈ဝ ကီလိုမီတာအကွာ အဝေးတွင်ရှိသော၊ ရေပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသော၊ နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည် Italian Job ရိုက်ကူးသည့်ဗင်းနစ်စ်မြို့သိုထွက်ခွါပါမည်၊ ဗင်းနစ်မြို့သို့ရောက်လျှင်၊ မော်တော်ဘုတ်ဖြင့်ထူးမြောင်းတလျှောက်လှည့်လည်ပြီး၊ ဗင်းနစ်စ်မြို၏အံ့သြဖွယ်ရာ ဗိသုကာလက်ရာများဖြင့်ပြည်နှက်နေသောခွေးများနန်းတော်၊ စိန်မာ့ရင်ပြင်ကိုလည်ပတ်လေ့လာပါမည်။ ၄င်းနောက် နေ့ လည်စာကို သုံးဆောင်ပြီး၊ ဆက်လက်၍ GlassBlowing စက်ရုံကိုသွားရောက်လေ့လာပြီးနောက်၊ညနေစာကိုသုံးဆောင်ပါပြီး၊ ဗင်းနစ်မှသြါူငညေညသသို့ထွက်ခွါပြီး၊ တဆင့် Venoto သို့ထွက်ခွါကာ၊ ဠနညနအသတွင်ညအိပ်ပါမည်။Hotel : Double Tree by Hilton Venice North ( or ) Similar
Day 12 :Veneto – Padova– Florence ( B / L / D ) (– ဖလော်ရန်စ် )
ဗန်နီတိုမှတဆင့် - ပါဒိုဗာ၊ထိုမှတဆင့်၊ ၂၂၂ ကီလိုမှီတာအကွာအဝေးတွင်ရှိသော၊အီတလီနိုင်ငံ၏ လည်ပတ်စရာကောင်းသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည့်၊ဖလောရန့်မြို့သို့ထွက်ခွါပါမည်။ ဖလောရန့်မြိုရောက်လျှင်၊ နေ့လည်စာကိုဦးစွာသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ နေ့ တဝက်လည်ပတ်မည့် အနေဖြင့်၊ သာယာလှပသောမြို့ ၏ရှုခင်းများကြည့်ရှုပြီးနောက်၊ထင်ရှားသောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘုရားကျောင်းနှင့်ရှေးခေတ်ရွှေရောင်းဝယ်ရေးပြုလုပ်သည့်ှုီုကသာသ Duomo Cathedral, Plazza di Signoria, Palazzo Vecchio andBasillica of Santa Croce များသို့ လေ့လာလည်ပတ်ပါမည်။ ပြီးနောက်တည်းခိုမည့်ဟိုတယ်သို့ရောက်ကာ၊ ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်ညစာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။ Hotel : I Clliegi Hotel Reggello or Similar
Day 13 : Florence – Rome ( B / L / D ) ( ဖလော်ရန်စ် - ရုန်း )
နံနက်စာံ Hot Buffet Breakfast ကိုဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်ထွက်ခွါခွင့်ကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ ဖလောရန့်မြို့မှ ၂၉၈ ကီလိုမီတာအကွောအဝေးတွင်ရှိသော၊ ရောမဟုအီတလီနိုင်ငံသားများကခေါ်သောရုန်း သို့ထွက်ခွါပါမည်။ ရုန်းသို့ရောက်လျှင်၊ နေ့လည်စာ ကိုဦးစွာသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ နေ့ တဝက်လည်ပတ်မည့် အနေဖြင့်၊အတိတ်ကာလအမှတ်တယနေရာများဖြစ်သော the ColosseumForum, theMouth of Truth ( Palatine Hill ), the Spanish steps, Travis fountain များသို့လည်ပတ်ပါမည်။ ညနေစာ Fish Menu ကိုသုံးဆောင်ပြီး၊ တည်းခိုမည့်ဟိုတယ်သို့ရောက်ကာအိပ်စက်အနားယူပါမည်။Hotel : Holiday Inn Pisana Hotel Rome or Similar
Day 14 : Rome ( B / L / D ) ( ရုန်းမြို့လည်ပတ်မှု )
နံနက်စာံ Hot Buffet Breakfast ကိုဆောင်ပြီးနောက်၊ တနေ့တာလည်ပတ်မှုကိုဗာတီကန်မြို့ ဟောင်းလည်ပတ်မှုမှစတင်ပါမည်။ ၄င်းနောက် St Peter’sBasilica, St Peter Basilica3hrs whisper သို့၃ နာရီခန့်လည်ပတ်လေ့လာပြီး နောက်နေ့လည်စာစားသုံးရန်အတွက် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ Zhong Yi Restaurant တွင်စီစဉ်ထားပါသည်။ နေ့ တဝက်ကို လွတ်လပ်စွာဈေးဝယ်ခြင်းပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားပါသည်။ နှုတ်ဆက်ညစာကိုPapa Rex Local Beef Menu Restaurantတွင်ပျော်ပျော်ပါးပါးသုံးဆောင်ပြီးနောက်ခရီးစဉ်၏ နောက်ဆုံးညအဖြစ် Holiday Inn Roma Aurelia or Similar Hotel တွင် အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။
Day 15 : Departure Day ( B ) ( ရုန်းမြို့မှမိမိနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ထွက်ခွါမည့်နေ့)
နံနက်စာံ Hot Buffet Breakfast ကိုဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်၍ဟိုတယ်ထွက်ခွါခွင့်ကိုမပြုလုပ်မီအားလပ်အချိန်ပေးထားပါသည်။ ၄င်းနောက် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်၍ဟိုတယ်ထွက်ခွါခွင့်ကိုပြုလုပ်ပေးပြီး လေဆိပ်သို့ပို့ ဆောင်နှုတ်ဆက်ပါမည်။ ခရီးစဉ်ပြီးဆုံး၍မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။
Program Include : ( ခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်သည့်အရာများ )
Airport Transfer2ways ( France in / Italy out )
14 Nights Accommodation with daily breakfast at 3.5*~4* Hotel
13 - times Lunch and 13 - times Dinner ( Chinese food & Thai Food & Traditional food )
Through out Tour Director and English speaking guide for Historical Site
Air conditional coach for All Transportation ( LDC : Long Distance Coach )
Suitcase per person included in /out hotel only
Entrance fees as specific itinerary
Boat Fare for specific program
Daily Mineral water for one person for one bottle
Tipping for Local tour guide , Tour Director, Restaurant & Driver
Program Exclude: ( ခရီးစဉ်တွင်မပါဝင်သည့်အရာများ )
Entrance fee and requested sightseeing program for not as itinerary
Personal insurance and personal uses
Any Optional Tours, Night tour, as group should abide to LDC/ Driver’s regulations on driving hours
Price DOES NOT include ANY CITY TAX as cash payment is required. Pls ask ur tour leader pay direct to Hotel.
Remark :Please note that : Part of major event period ( X’mas / New Year / April ( Thingyan Festival
Holiday ) , air ticket will plus high season air port tax especially Y, H,M, Brov, H,M, Brovo class tax.
Grand EU 6
Child Rate Payable : 80% of Adults fare ( A child must be under 12 years, sharing twin room with2adults – no extra bed). Children’s ages MUST be specified on the rooming list to qualify for child rates. If child take extra bed, we will charge for adults fare ).